Dhuxusha oo aad u kacday abaarta darteed iyo joojinta la cusboonaysiin karo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Dhuxusha ayaa kor u kacday abaarta darteed iyo joogsiga la cusboonaysiin karo
Tomas Bigordà | | Awoodda dabaysha, tamarta Haydarooliga, Tamarta Korontada, Tamarta Qoraxda Photovoltaic, Tamarta Caadiga ah, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Nukliyeerka (22,6%), dabaysha (19,2%) iyo kuleylka dhuxusha (17,4%) waxay kujiraan 3-da ugu sareysa teknoolojiyada si loo soo saaro koronto sanadka 2017.
Abaarta daran (oo leh kaydadka 38% ee awooddooda ugu sarraysa) ayaa dib u dhalasho siinaysa dhuxul. Roobabka yar ayaa hoos u dhigay tabarucda jiilka Haydarooliga ku shaqeeya ee nidaamka korantada illaa 7,3% wadarta.
Sababtaas awgeed, dalabku waa in lagu jaangooyo dhuxusha iyo gaaska (oo ku deeqay 31,1%, ku dhowaad saddex meelood meel dalabka).
Nasiib darrose, taasi waxay ka dhigan tahay kororka qiiqa hawada lagu sii daayo.
Arrin kale ayaa ah dib-u-cusbooneysiin - oo awooddeeda la rakibay aysan kordhin sanadkii la soo dhaafay - waxay meteshay 33,7% wax soo saarka korontada (waxay ahayd 40,8% sanadkii 2016)
Isku dhafka tamarta ee 2017 wuxuu ahaa mid xasilloon, oo ay hoosta ka xariiqday tamarta nukliyeerka iyo dabaysha. Kuwan dambe waxay ku sugnaayeen heerar la mid ah kii 2016 (19,2%). "Awoodda dabayshu way is bedbeddelaysaa gudaha iyo xilliyada, laakiin xisaabinta sannadlaha ah kala duwanaanshaha ayaa hooseeya", ayuu caddeeyay Fernando Ferrando, madaxweynaha Fundación Renovables.
Nasiib darrose, hoos u dhaca ku yimid wax soo saarka Haydarooliga ayaa ku meeleeyay qaybtan booska lixaad (waxay ka baxday 14,6% ilaa 7,3%).
Hoos udhacani wuxuu daboolay dhuxul (wuxuu ka bilaabmayaa 14,3% ilaa 17,4% baahida) iyo, gudaha qiyaas yar, gaaska.
1 Wax horumar ah lagama gaadhin xilliga kala guurka ah ee mustaqbalka
2 Kala guurka mustaqbalka
3 Xaraashyada mega-ga aan-ka-maarmeyn
4 Qiimaha barkadda
Wax horumar ah lagama gaadhin xilliga kala guurka ah ee mustaqbalka
Pedro Linares, oo ah borofisar ka ah Guddoomiyaha Tamarta iyo Joogtaynta Jaamacadda Pontifical ee Comillas ayaa ku doodaya, kala-guurka tamarta ayaa siinaya xannibaadda calaamadaha. "Haddii la yareeyo helitaanka biyaha kaydsan, waa kheyraad aynaan xakamayn karin, beddelka la heli karaana waa dhuxul iyo gaas, natiijada ka soo baxdaa waa culeys weyn oo ka mid ah shidaalka la sii daayo iyo qiiqa gaaska oo badan".
Professor-ku wuxuu ku darsanayaa faa iidooyinka baarkinka baaxadda weyn leh, maxaa yeelay "haddii uu jiro sanad wanaagsan, isku dhafka korantadu aad ayuu nadiif u yahay." Intaas waxaa sii dheer, tani waa tiir muhiim ah oo lagu xoojinayo ama lagu taageerayo ilaha la cusboonaysiin karo. Si kastaba ha noqotee, ku tiirsanaanta xad dhaafka ah ee biyaha roobka ayaa sababa u nuglaanta nidaamka, tan iyo markii isbedelka cimilada waxay sameyn kartaa dhacdooyin soosaarka hawo-yarida soo noqnoqda.
Kala guurka mustaqbalka
Sidaa darteed, haddii ay dhacdo in kheyraadka biyaha ay koraan oo ay yaraadaan, Linares wuxuu aaminsan yahay in “waa inaan bilownaa inaan tixgelinno sida loogu beddelo tamarta shidaalka tamarta la cusboonaysiin karo, marka hore beddelidda dhuxusha iyo, mar dambe, gaaska, wax lagama maarmaan u ah in la gaaro dhammaystirka buuxa kala-goynta nidaamka korontada ”. Furaha ayaa noqon doona in la go'aamiyo heerka beddelka shidaalkan shidaalka ah.
Khubarada ayaa ku baaqaya cusbooneysiin dheeri ah si aysan ugu tiirsanaan biyaha roobka.
Masuuliyiinta iyo khubaradu waxay u arkaan inay lagama maarmaan tahay in la jabiyo dariiqa wadada si loo gaaro kala guur xagga tamarta ah oo loo maro qaab sii waara Ma beddeli kartid tusaalaha maalin ilaa maalin kale; laakiin haddii ay jirto rabitaan siyaasadeed, wax walba waa suurtagal.
Dhibaatadu waxay tahay inay jiraan oligopolies iyo dano badan oo la isku haysto.
Khubaro badan ayaa rumeysan: “Doodda ah, maadaama uusan roob da’in, wax kale oo la doortaa ma jiro aan ka aheyn in la aado dhuxul iyo in, sidaas darteed, korontada ayaa ka qaalisan wax la aqbali karo Kuma siin karno wax ahaan aan la beddeli karin, sida qof aamusnaan ku silcaya ”.
Dhowr waddan, sida Danmark, Jarmalka, Netherlands iyo kuwo kale ... ma aysan joojin maal-gashiga dib-u-cusboonaysiinta nidaamkooda korantada, taas oo macnaheedu yahay "in laga tago shidaalka shidaalka iyo nukliyeerka, oo loo baneeyo nidaam ku saleysan cusbooneysiin ”.
"Waxaa jira tiro badan faa'iidooyinka ee horumarka tikniyoolajiyadeed ee ku saleysan dib-u-cusbooneysiinta iyo, marka lagu daro, waddamada ay ka warbixiso sarreynta dhinaca dhaqaalaha ”.
Xaraashyada mega-ga aan-ka-maarmeyn
Dawladdu waxay horey u sameysay qorshe lagu kordhinayo joogitaanka ilaha la cusbooneysiin karo, iyadoo loo marayo nidaamka xaraashka ee horay u siiyay 8.737 megawatt cusub oo ah awood dib loo cusboonaysiin karo, si loo gaaro 20% tamarta la cusboonaysiin karo sanadka 2020, sida ku cad heshiiskii Paris.
Waqtigaan la joogo, sicirka wax soo saarku waa ilaa 53 euro halkii saac (megawatt), laakiin haddii aan eegno adduunka oo dhan, tamarta mar hore ayaa laga heli karaa qiimo aad u hooseeya, tusaale ahaan, 17 euro halkii MWh ee laga helay xaraashka bilaashka ah ee lagu qabtay dhowr toddobaad ka hor Mexico.
Laakiin sida laga soo xigtay khubaro dhowr ah, “Horumar yar ayaa laga sameeyay jidka lagu gaarayo isku-dhafka tamarta la cusboonaysiin karo 100%; dabaysha iyo tamarta qoraxda way curyaan yihiin, mana jiraan wax qorshe ah oo laga yeelayo dhuxul la'aan iyo nukliyeer la'aan "
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Dhuxusha ayaa kor u kacday abaarta darteed iyo joogsiga la cusboonaysiin karo
Kordhinta gaadiidka dadweynaha ayaa loogu baaqayaa si looga fogaado kuleylka adduunka
Burlington, waa magaaladii ugu horreysay ee Mareykanka ku shaqeysa tamarta dib loo cusboonaysiin karo